သင့်ကုန်ပစ္စည်းအတွက် မှန်ကန်သည့်သိုလှောင်ရုံရွေးချယ်နိုင်ရန် စစ်ဆေးရမည့်အချက် (၁၂) ချက် - Logistics Guide
သင့်အနေနဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး သင့်အဆက်အသွယ်များထံသို့ လျင်မြန်ချောမွေ့စွာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးစေလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သင့်လျော်တဲ့ 3PL ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (သိုလှောင်ရုံအပါအဝင်) ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ သူတို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မျက်မြင်စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်တာထက် သူတို့ဟာသိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးမှာ အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းမှုရှိသူများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို စိစစ်အတည်ပြုသွားဖို့လိုပါတယ်။
အဲဒီလို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် စစ်ဆေးကြည့်ရမယ့် အချက်( ၁၂ )ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) သင့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းသိကြပါသလားAre they comitted to know your product?
သင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံထိန်းသိမ်းပေးမည့် 3PL ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ သဘောသဘာဝကို သေချာသိရှိပြီးမှ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမယ်ဆိုတာ သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အလေးချိန်၊ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ သဘောသဘာဝတို့ကို သေချာစွာသိရှိဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ကုန်ပစ္စည်းဟာ ဘေးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းလား၊ သက်တမ်းသတ်မှတ်ထားသလား၊ ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်တာလား၊ သိုလှောင်ရာ ဒါမှမဟုတ် သဘောင်္တင်ပို့ရာမှာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်လို့ရသလား၊ အအေးဓာတ်ပေးထားဖို့လိုသလား၊ အပူချိန်နဲ့စိုထိုင်းစကအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလား၊ အခြားပစ္စည်းများအနားထားလို့ရမလား၊ ပစ္စည်းတန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ၊ အာမခံရောထားဖို့လိုမလား၊ ပစ္စည်းသယ်ယူရွေ့ပြောင်းဖို့ အထူးပစ္စည်းကရိယာလိုမလားစတဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိမှ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာ မမျှော်လင့်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းမဲ့သူအနေနဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် သူတို့ဟာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတာ ပြသတာဖြစ်တဲ့အလျောက် အခြားသိုလှောင်ရုံများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး သေသေချာချာစိစစ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
(၂) ပစ္စည်းပမာဏနဲ့နေရာအကျယ်အဝန်းလုံလောက်မျှတမှုAdequate volume and space
သင့်ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားနဲ့ စုစုပေါင်းနေရာယူမဲ့ပမာဏကို မူတည်ပြီး သိုလှောင်ရုံမျက်နှာပြင်ဧရိယာ ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကို ပုံကြမ်းရေးဆွဲပြနိုင်မယ့် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုသေသေချာချာ ထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့ရှင်းလင်းပြနိုင်မယ့် သိုလှောင်ရုံမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
(၃) သင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် သူတို့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကရိယာ၊ စက်ယန္တရားများ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါသလား
Is their equipmentagood fit for your product type?
သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့အခါ၊ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနဲ့ အကောင်းဆုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့် ကရိယာတန်ဆာပလာတွေကို ဝယ်ယူတာဖြစ်ဖြစ် ငှါးရမ်းတာဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုတာသေချာပါစေ။
(၄) အလေးချိန်၊ အတိုင်းအတာနှင့် ထုပ်ပိုးမှုပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို သဘောင်္တင်ပို့ရန်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ကုန်ပစ္စည်းအတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန်ဖော်ပြသည့် အမှတ်သင်္ကေတများကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သဘောင်္တင်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူရှိပါစေ Enough handling personnel
ကုန်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သဘောင်္တင်ပို့မှုတွင် ပြသာနာဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းတစ်ချက်မှာ အစီအစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူများ ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မယ့် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းပမာဏနဲ့ အခြားလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ခိုင်မာကျစ်လစ်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ချပြသင့်ပါတယ်။
(၆) W M S အသုံးပြုပါစေThey useaW M S
ပစ္စည်းလက်ခံတာ၊ ထားသိုတာ၊ ပြန်ထုတ်တာကို သိုလှောင်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Warehouse management systems, W M S) မှာအလွယ်တကူ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်တဲ့အတွက် W M S အသုံးပြုမှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
(၇) ကုန်ပစ္စည်းများ စာရင်းအသေးစိတ်တိကျမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု
သိုလှောင်ရုံအတွင်း ပြသာနာအများဆုံးဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာတစ်ရပ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်းတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ဘယ်လိုစနစ် အသုံးပြုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြစေသင့်ပါတယ်။
(၈) လုပ်ငန်းတွင်း၊ လုပ်ငန်းပြင် အရည်အသွေးမီလုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှု စံနှုန်းများရှိပါစေ
They have internal and external metrics
သိုလှောင်ရုံတစ်ခုမှာ အရည်အသွေးမီလုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှု စံနှုန်းများရှိခြင်းဟာ သင့်ပစ္စည်းများအတွက် အဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုကို အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာ အချက်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သူတို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုချိန်မှာ သူတို့အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတွင်း အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုစံနှုန်း ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းပြင်ပသုံးစွဲသူများဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးတဲ့စံနှုန်းများ အသုံးပြုခြင်းရှိ၊ မရှိ အကဲခတ်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
(၉) လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအား အရေးပါမူရှိ၊ မရှိ
Ergonomics and productivity is important to them
လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ရွေးချယ်မယ့် သိုလှောင်ရုံအတွင်းမှာ လုပ်သားများအနေနဲ့ ဖြတ်လတ်တက်ကြွတဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပုံစံမျိုး ရှိနေသလားဆိုတာ လေ့လာအကဲဖြတ်ပါ။
(၁၀) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ၊ ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ
Work instructions, ISO certifications
သင်ငှါးရမ်းမယ့် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ သူတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွက် သက်ဆိုင်တဲ့ ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များရှိသလား၊ သူတို့ရဲ့လုပ်သားတွေကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
(၁၁) သပ်ရပ်သန့်ရှင်းပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ သိုလှောင်ရုံရှိပါသလား
They haveaclean and safe warehouse
သိုလှောင်ရုံဟာ ပစ္စည်းများရှုပ်ပွပြီး ညစ်ပတ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို သူတို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတာ ညွှန်ပြနေတာပါပဲ။စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံနဲ့တူနေတဲ့ သိုလှောင်ရုံဆိုရင် သူတို့နဲ့အလုပ်လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်ပါ။
(၁၂) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဟာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိသလား
Their transportation is top notch
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက် သင်ငှါးရမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီဟာ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို အစမှအဆုံးအထိ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေပဲ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိရမယ့်အပြင် အသက်သာဆုံးနှုန်းထားများရရှိအောင်လဲ ညှိနှိုင်းပေးနိုင်ရပါမယ်။ဆိုလိုတာက ကုန်စည်များပို့ဆောင်သည့်အခါ ယာဉ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ (ကား၊ ရထား၊ သဘောင်္စသည်) ပို့ဆောင်ရပါက အခြားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပါ ချိတ်ဆက်စီမံနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
အထက်ပါအချက်များဟာ ပြည့်စုံလုံလောက်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေမယ့် သင့်ကုန်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်မည့်သိုလှောင်ရုံတစ်ခု ရွေးချယ်တဲ့အခါ မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Source – SuperLight logistics
real storage (12 points)